Dhismaha Safaaradda Talyaaniga Ee Soomaaliya Ma Nuur Cadde Ayaa Iskaleh Mise Qaranka?Daawo Warbixino Muuqaal ah | Newsomali
Dhismaha Safaaradda Talyaaniga Ee Soomaaliya Ma Nuur Cadde Ayaa Iskaleh Mise Qaranka?Daawo Warbixino Muuqaal ah
Ayaamahaan waxaa soo baxay warar lagu kalsoon yahay oo sheegaya in Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Talyaaniga Nuur Xassan Hussen (Nuur Cade) uu dhismaha safaarada Soomaaliya ee dalka Talyaaniga shirkad ajaanib ah 18-sano ka kiraaystey. Nuur Cade waxuu safaarada ku kiraaystey lacag dhan $10,000 (toban –kun) iyada oo sagaalka danbana bishii lagu heshiiyay in Shirkadu bixiyaan $15,000 ( shan iyo toban –kun). Waxaa kale oo wararku intaa ku darayaan in Nuur Cade iyo Shirkadu heshiis ku galeen in 9-ka sano ee hore ay bixiso shirkadu $1080, 000 (melyaniyo sideetan kun oo doolar) iyada oo 9-ka sano oo danbana bixinaya $1,620,000 (melayan iyo lix boqol iyo labaatan kun oo doolar).
Safaarada Soomaaliya ee dalka talyaaniga ku taal waxaay waayadaan danbe u ahaayd hooy qaxoonti soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 200-oo qof kuwaas oo dalka talyaanugu u diidey sharci. Nuur Cade 4- sano ayuu safaarada gees kaga shaqaaysanayeey, dhinaciisa waxuu ka dhigtay mutuleel, kursi leader ahna wuu soo dhigtay oo uu isku war wareejiyo sidii Nin boqor ah. Dhinaca kale ee qaxoontiga Soomaalidu kaga sugnaayeen Safaarada waxaa ka muuqdey dayac baahsan oo qof indhihiisa ku arka mooyaane aan qoraal lagu sharixi Karin. Musqul ma lahaayn, biyo malahaayn, koronto ma lahaayn. Dadku waxaay wax ku karsanayeen gasacado ama koonbooyin sida dadka qaar u yaqanaan. Cajiib Safiir dhan oo safaarad noocaan oo kale dhinac kaga nool, dadkii uu masuulka ka ahaayna noloshaan kaga nool yihiin guriga uu ka haawl galo dhiniciisa kale. Xataa ma awoodi waayey in uu shoolad ama cooker aay wax ku karsadaan u gado?Halkaan ka fiirso Film document ah oo Safaarada Soomaaliya ee Dalka Talyaaniga uu ka sameeyey Nin U dhashey dalkaasi Talyaaniga 2012.